PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-08-27 - KUGQUGQUZELWA IMFUNDO KUBAZALWANE
KUGQUGQUZELWA IMFUNDO KUBAZALWANE
Ilanga langeSonto - 2017-08-27 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
LISEBENZA ngendlela ehlelekile ibandla icovenant Fellowship Church International (CFCI), eliholwa ngumphrofethikazi unkk Nomusa Dhlomo nomyeni wakhe umphostoli Collins Dhlomo odume ngele “Ngcubabuchopho” kwabamaziyo ethekwini.
Ngesonto inkonzo ibise-olive Convention Centre, ethekwini, kuzokhuthazwa imfundo kuleli bandla, izifundiswa ziyikazela ngamajazi kukuhle kuphelele.
Bekumenywe izingwazi nezingqwele emkhakheni wezemfundo, ngisho abebevela kuhulumeni kazwelonke imbala. Izifundiswa zingene kwachwaza indlu, zinanelwa yikhwaya yebandla iheavenly Voices ebelibangenisa ngengoma eyaziwayo uma kwethweswa iziqu.
Izifundiswa bezishaye ujenge zingena ngokwamandla emfundo yazo, kuhamba phambili abanezitifiketi, abanama- diploma, iziqu zasenyuvesi, ama- honours, masters, kwagcina abanezobudokotela nosolwazi. Bengakahlali phansi kuculwe iculo lesizwe, yathatha intokazi enesiphiwo nogcobo lokuphatha uhlelo, unonkululeko Shezi, yemuka nalo.
Ingane encane, ubobo Mungwe, ibashiye bebambe ongezansi inikwa ithuba lokudansa umdanso wendumiso. Icikoze ngomzimba wayo ingane kwachazeka abazalwane. Umphrofethikazi udhlomo ungene epulupiti kwacaca ukuthi kungena umama webandla onazo zonke iziqu zokuba ngumama walo.
Wethule isigamu senkonzo yomnikelo, wafunda encwadini yokuqala ka-isaiah ivesi le-19, wagcizelela ukulalelwa kukankulunkulu okunomvuzo maqede wathinta izinhliziyo zabazalwane ngokunikela ngenhliziyo enothando nelangazelelayo. Uthe ehlala phansi abazalwane bayiqathaza ngapha nangapha imali, abanye bephethe izimvilophi eziqumbile zokweshumi beziyisa phambili.
Kube sekubizwa izikhulumi, cishe zonke bezithi zingakayiqali inkulumo zincome igalelo likasomabhizinisi webandla, umnu Muzi Ntombela nowakwakhe, ngeqhaza labo empumelelweni yezinto eziningi abazenzayo ebandleni.
Ukabelo Mokoena wasekleksdorp ukhuthaze intsha ukuba ifunde, ibekezele, ihlale ekumethembeni unkulunkulu, ingadidwa yizinhlupheko esuke ibhekene nazo njengoba naye ebale ukushonelwa nguyise esemncane kodwa wahlala ethembeni wagcina eseyisifundiswa esiphumelelayo.
Intokazi yaselamontville, ethekwini, udokotela Lihle Qulu osengudokotela wezifo eziphathelene nokusebenza kwemizwa yomuntu nengqondo, ulande umlando wakhe efunda kanzima, ephuma emndenini ohlwempu, engena ephuma ezintweni zobusha ezingamsizanga, kepha wagcina eholwe yisandla sikamoya Oyingcwele samtakula sagcina simenze waba ngudokotela okumanje ufundisa e-university of Kwazulu-natal. Naye udkt Qulu uqinise idolo intsha ukuba iyazi into eyifunayo empilweni, isebenze ngokuzikhandla nokuzinikela.
Udkt Nkosinathi Sishi oyiphini likamqondisi emnyangweni wezemfundo kuzwelonke, utshele amakholwa ukuthi uhulumeni wenza imizamo yokuba akhe izikhungo zemfundo ephakeme zibe ziningi ukugqugquzela imfundo kuleli. Ukhalile nokho ngokugqoza kwemisebenzi yezifundiswa ezifofobele emakhaya neziqu zazo ngenxa yokuntuleka kwayo wathi konke lokho uhulumeni uphezu kohlelo lokukuqeda.
Isikhulumi sosuku kube ngudkt John Tibane obekungathi uthelwe ngezibonkolo naye oqale inkulumo yakhe ngokuncoma ukuhleleka kwezinto kuleli bandla, waphinde wasukumisa umnu Ntombela nowakwakhe ebancoma. Ubephethe umyalezo olula wokuba abaholi mabakhulume into okuzothi uma beyizwa abantu bayikholwe bese bebalandela. “Udinga ulwazi oluphelele ukuze ufinyelele edolobheni elinakho konke, usebenzise ubuciko bakho. Iningizimu Afrika igcwele usizi nezinhlupheko, idinga abantu abanolimi lokufundisa. Izimvu ezingenamelusi ziyanhlanhlatha, owesifazane ohlukumezekile emzini wakhe uphila impilo yokudideka. Kanjalo nomholi ongenzi kahle uholela izwe lakhe ehlathini,” kubeka udkt Tibane.
Udkt Tibane uqhubeke wathi: “Sonke singabaholi, uma umuntu ehlanza indlu ibe yinhle ekhipha ubuciko emsebenzini wakhe naye ungumholi kwakwenzayo ngoba uzoba yisibonelo esihle ngomsebenzi omuhle awenzile. Njengomholi, bona ikusasa wena kuqala ukuze uholele abakulandelayo kulo. Noma ungaba nezinkinga manje kodwa usenalo ikusasa.”
Umphostoli Dhlomo ukubeke kwacaca ukuthi lolu suku baluqokele ukuba kukhuthazwe ukufunda ebandleni lakhe, kuthi nalabo abazithele ngabandayo basukume bazithathe. Okufike kwahlaba umxhwele kule nkonzo kube: Ukugcinwa kwesikhathi yizikhulumi nokwenziwa kwezinto ngendlela efanele. Abalawula umsindo bawenze ngobuchwepheshe umsebenzi wabo bungekho ubunswinswinswi bezipikha. Wukwemukelwa yizintokazi nezinsizwa eziqeqeshiwe ngesizotha uma ungena esontweni. I- soprano kankk Busisiwe Shozi ocula ekhwayeni inenkosi phakathi, ikusukumisa uhleli phansi.
Umphostoli Dhlomo ukhuluma ngolimi lwesizulu yize eyisifundiswa esinophondo ekhanda. Ithimba lendumiso likuthatha likubeke kwelesithathu likapawula izulu ngomculo. Okumele kuqashelwe ngokuzayo wukuthi izifundiswa ebezigqoke amajazi kubukeka kabi uma ziyizicukuthwane ziphinde zibonakale sezithatha izithombe ngomakhalekhukhwini noma zithatha abanye izithombe zisamisiwe phambili. knowledge.simelane@ilanganews. co.za
UMPHOSTOLI Collins Dhlomo nowakwakhe umphrofethikazi Nomusa Dhlomo enkonzweni yokugqugquzela imfundo ebandleni labo.
ITHIMBA lendumiso lebandla icovenant Fellowship Church International lithokozela inkonzo yezifundiswa ebikuleli bandla ngesonto.